Fiarovana ny mpanjifan’ny Jirama: mandalo ambaratongam-panadiovana maro ny rano | NewsMada
Fiarovana ny mpanjifan’ny Jirama: mandalo ambaratongam-panadiovana maro ny rano
Par Taratra sur 26/09/2018
Manoloana ny vaovao niely, omaly, tamin’ny tambajotran-tserasera, manamafy ny Jirama fa madio ny rano mivoaka amin’ny toeram-pamokaran-drano rehetra mankany amin’ny mpanjifa. Tsy azo amaivanina izany ary misy teknisianina misahana ny asa.
Mandalo ambaratongam-panadiovana sy fitiliana maro ny rano mankany amin’ny mpanjifa ary manaraka fenitra rehetra takin’izany, araka ny fanamarihan’ny Jirama. Manao fitsirihana isan’andro ny kalitaon’ny rano omena ny mpanjifa ny Jirama ary miara-miasa amin’ireo sehatra matihanina momba izany, toy ny Institut Pasteur de Madagascar. Marihina fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny tahan’ny chlore ampiasaina manadio ny rano tsy ahafahan’ny biby na bactéries na inona na inona karazany mivelona.
Nanomboka ny taona 2006, misy ny fiaraha-miasa amin’ny ONG East (Eau agriculture et santé en milieu tropical) mitandro ny fahasalaman’ny mpanjifa eto Antananarivo amin’ny famatsiana rano madio fisotro azo antoka. Efa nisy ihany koa ny tetikasa Masay, nahazoana famatsiam-bola avy amin’ny faritra Ile de France sy ny Agence Eau Seine Normandie, nanomboka ny taona 2013, mahakasika indrindra momba ny rano fisotro.
Mbola vitsy ny mampiasa ranon’ny Jirama
Olana iray hita eo an-dRenivohitra, mbola vitsy ny mampiasa ranon’ny Jirama, ny maro anisa izany, mety misotro rano tsy voadio. Isaorana mialoha ireo mpanjifa manana fanamarihana momba ny kalitaon’ny rano avy amin’ny Jirama mba hampilaza avy hatrany ny tompon’andraikitra na manatona ny masoivoho akaiky azy indrindra, na mandefa mailaka amin’ny communication@jirama.mg.
Miainga avy ao Mandroseza ny fizaran-drano eto Antananarivo, mandalo amina tambajotra ambaratonga maromaro. Misy antitra amin’ireo ary efa misy voasolo fa mbola eo koa ireo tsy voasolo, PVC maherin’ny 30 taona. Toy ny natao teny Itaosy, hidina ifotony hijery sy hanadihady ity tranga iray ity koa ny ekipan’ny Jirama.
Noho ny orana nikija: tapaka ny RN5 Fenoarivo Atsinanana-Soanierana Ivongo 17/04/2021
Antson’ny Firenena mikambana : 1,5 tapitrisa euros hanampian’ny Frantsay ny any atsimo 17/04/2021
Covid-19 : 832 ny tranga vaovao, efatra namoy ny ainy 17/04/2021
Haparitaka amin’ny hopitaly – CTC: nahazo fitaovana iadiana amin’ny Covid-19 17/04/2021
Fanoloana ny mpanazatra ny Barea: nandiso ny vaovao momba an’i Dupuis ny minisitra Tinoka R. 17/04/2021